Usizo – 360 OpenPlotter
International 360 Photographer Agency
London Tours and Specials for 360 Photography
Riverboat shuffle through Europe
Flying Ephakeme, Ever Ephakeme
Bekanye drones wethu ubhaliswe ngokomthetho singenza ukubukwa Amazing eyakho iphrojekthi, umcimbi noma ukufakwa. Kungakhathaliseki yileso siphetho osifinyelele nawe lomshado, isikebhe noma isakhiwo, ngisho namathafa zasemoyeni.
bezithombe zethu zokwenza izithombe okungenani 4K isixazululo kanye e acwilisiwe ngokugcwele 360. Bonke abawinile ngomsebenzi wabo abenzi mafilimu ngamazwe nezithombe imincintiswano. Zethu 360 Abathwebuli kukhona Google esethembekile futhi unamalungelo akhethekile ukufinyelela ezindaweni ezifihlekile emadolobheni akubo ekhethiwe. Ngaphansi kwezimo ezivamile izithombe ukulayisha bathathe izikhundla kuqala ku-Google. Umthwebuli ngamunye has ukubukwa abangaphezu kwesigidi. Ngobakho ibhizinisi kungathatha indawo yokuqala ku-Google Maps usezingeni izindlela zethu neshaya asinazo izithombe.
Legal Flight Rights & wamaphepha
nohulumeni kanye neziphathimandla zendawo angabhubhisa wonke amacebo eyakho ukukhiqizwa. Special uma sikhuluma izindiza kanye nezithombe zasemoyeni. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. Siye opharetha lwasendaweni kuncike. Leli phepha kuvumela suka efana indiza futhi cababa like indiza. Ngamunye suka is esemthethweni ebhalisiwe wathola imvume. Leli phepha ayikuvumeli ukwenza ifilimu noma izithombe. Ngenxa yalesi khona imithetho ehlukile kanye neminyango kahulumeni.
Namanje hhayi zahambisana. Izinhlawulo kungaba abiza 20000 Euro phezulu ejele. Sihlela kuwe Europe flightrights futhi babanika izincwadi zomthetho. Kuyinto zingenza ukuhlela wena eyakho opharetha kuhla lwethu, ukuthi ungakwazi fly Drone yethu engokomthetho. Le modeli livame ukusetshenziswa imikhiqizo TV ezimweni kuyaphuthuma noma yizivakashi ukuthi uthanda ukukhiqiza siqu izithombe zomthetho. Buza kithi ekuqaleni frontto ukuxoxa imodeli engcono kuwe.
© 2018 OpenPlotter
EnglishDeutschRomânăNederlandsMagyarAfrikaansShqipአማርኛالعربيةՀայերենazərbaycan diliEuskaraбашҡорт телеБеларускаяবাংলাbosanski jezikБългарскиမြန်မာစာCatalà粤语BinisayaChinyanja中文(简体)中文(漢字)CorsuHrvatskiČeštinaDanskEsperantoEesti keelvosa VakavitiWikang FilipinoSuomiFrançaisFryskGalegoქართულიΕλληνικάગુજરાતીKreyòl ayisyenHarshen HausaʻŌlelo HawaiʻiHmoobHmoob DawעבריתМары йӹлмӹहिन्दी; हिंदीÍslenskaAsụsụ IgboBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語basa Jawaಕನ್ನಡҚазақ тіліភាសាខ្មែរкыргыз тили한국어KurdîພາສາລາວLatīnaLatviešu valodaLietuvių kalbaLëtzebuergeschмакедонски јазикMalagasy fitenyBahasa MelayuമലയാളംMaltiTe Reo Māoriमराठीмарий йылмеМонголनेपालीNorskQuerétaro OtomiPapiamentuپارسیPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийgagana fa'a SamoaGàidhligCрпски језикSesothochiShonaسنڌيසිංහලSlovenčinaSlovenščinaAf-SoomaaliEspañolBasa SundaKiswahiliSvenskaTagalogReo Mā`ohi'Тоҷикӣதமிழ்татарчаతెలుగుภาษาไทยfaka TongaTürkçeудмурт кылУкраїнськаاردوOʻzbek tiliTiếng ViệtCymraegisiXhosaייִדישèdè YorùbáMàaya T'àanisiZulu
© 2019 360 OpenPlotter
Powered by Tocan
Idea: Zeitreise /Time Journey by Tocan-Tweezer.org